> Resource > Video > Sida loo soo dejinta fiidiyo Videos in Sony Vegas
Videos fiidiyo sida caadiga ah u baahan tahay in la saxar ah ka hor inta aan daawaday TV-ga, hoorto online, ama u gubato si DVD sida hadiyado. Sony Vegas waa software tafatirka ugu awooda badan fiidiyo video ee suuqa. Waxa ay taageertaa ugu qaabab video diiwaan by kaamirada, gaar ahaan kaamirada Sony ka SD in kaamirada HD.
Mararka qaarkood, degida videos fiidiyo ugu Sony Vegas ma fududa. Maqaalkani waxa uu kaa caawin doonaa sidii aad ku heli jawaabta ku saabsan sida loo soo dhoofsadaan videos fiidiyo ugu Sony Vegas , qaybsan DVD fiidiyo video in Vegas oo aan DVD fiidiyo video in Vegas.
Qeybta 1: Vegas Import DVD cajalid by DVD fiidiyo
Marka hore, hubi waxa aad u baahan doontaa in aad soo dhoofsadaan DVD fiidiyo video la software Sony Vegas
DVD drive (kombiyuuterada inta badan, haddii aan, ka eeg dejinta fiidiyo video isticmaalaya USB ama cable Fireware)
Software Sony Vegas
Sida loo soo dhoofsadaan DVD fiidiyo video in Sony Vegas:
Talaabada 1: Place DVD ah dhamaystirin diiwaan DVD drive computer ee
Talaabada 2: Orod software Sony Vegas oo taga si ay Project / Import DVD fiidiyo cajalid . In versions qaar ka mid ah Vegas waxaad ka heli doontaa tan hoos File / Import / DVD fiidiyo cajalid.
Talaabada 3: The clips video badbaadi doonaa si aad u computer sida MPEG2 (* .mpg) files.
Talaabada 4: Tag Media Mashruuca, ay helaan * .mpg video files kaliya laga keeno.
Waxyaalood oo muhiim ah :
Waxaad ma dajiyaan ganacsi-soo saaray karo DVD u cajalladaha kuwa lagu gubay koobi-ilaalinta. Waxaad u baahan tahay awood badan DVD diinta software in aad nuqulka videos ugu horeysay.
DVD diiwaan isticmaalaya kaamirada AVCHD (files MT2S) aan la aqoonsan yahay iyada oo loo marayo DVD Import. La tasho gacanta lagu fiidiyo ah ee caawimaad, ama beddelid files MT2S dhammaan qaabab video oo caan ah .
Cajalladaha fiidiyo DVD-RW toogtay hab VR oo kaliya in la keeno karo by Vegas haddii aad isticmaalayso Windows XP Service Pack 2 ama ka weyn.
Qeybta 2: Import aan DVD fiidiyo Videos in Sony Vegas
Ka sokow DVD fiidiyo, waxaa kale oo jira noocyo kale oo kaamirada sida fiidiyo adag drive disk, flash fiidiyo xasuusta, fiidiyo miniDV, iyo wixii la mid ah. Qaadashada fiidiyo disk adag tusaale ahaan, qoraalkii ugu dambeeyey ee Sony Vegas u oggolaadaan in aad soo dhoofsadaan files si toos ah u kombiyuutarka. Tallaabooyinka faahfaahsan noqon doonaa duwan yar ee version kasta, laakiin mabda'a isla khuseysaa in version kasta.
1. Tag File / Project iyo raadiyo Import (waxa kale oo aad arki karto Import AVCHD fiidiyo).
2. Hel fiidiyo gudahood menu Source ah.
3. Muddo menu meel loo ahaadana iyadaa u, soo qaado meel ay u guuraan faylasha.
4. Riix OK. Tani waxay bilaabi doonaan habka laga tegaya files ka fiidiyo ugu computer.
Sida la mid ah sida loo dhoofiyo videos DVD fiidiyo ugu Vegas, Marka ay taasi la dhamaystiro, waxaad arki doontaa faylasha aad ee suuqa kala Project Media.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan arkin, kuwaas oo fursado gudahood aad version of Vegas, waxaad u baahan doontaa isticmaali software default soo socda aad fiidiyo inuu u dhaqaaqo files ka fiidiyo ah in computer ugu horeysay ka dibna dajiyaan videos in Sony Vegas.
Waa maxay Next
Ka dib markii sawir / audio / qaabab video waxaa taageera in ay dajiyaan in Sony Vegas. Waxaa Hubi haddii aad fiidiyo video aan la keeno karo in Vegas. Iyo haddii loo baahdo, u isticmaalaan Converter video si ay u helaan oo ay taageerayaan videos Vegas hore.
AA3, AAF, AIF, ASF, AU, AVI, BMP, BWF, CDA, qod, DLX, DPX, DV, EXR, FLAC, GIF, HDP, IVC, JPG, M2T, M2TS, MOV, Sony MXF, MP3, MP4 , M4A, MPEG-1 iyo MPEG-2 video, OGG, oma, PCA, PNG, PSD, QT, R3D, SFA, SND, Jabbuuti, TIFF, TGA, Vox, W64, regelingen, WDP, WMA, wmv
Fiiro gaar ah: Mararka qaar waxaad u baahan tahay software si aad u eegto waxa codec dhabta ah ee video ay u dajiyaan in Vegas. In sidaa la yeelo, isticmaali GSpot si aad u ogaato waxa video codec loo isticmaalo iyo rakibi dhiganta codec in ay dajiyaan in Vegas. Download GSpot halkan.
Sidee baan Edit karaa iyo qoraaga DVDs My?
Download ee Best 1-Guji YouTube Downloader
6 siyaabaha looga cabsado inuu u ciyaaro Movies Xvid iyo Videos la XviD Video Player